Tsamba yeDare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha | Bhuku Regore ra2015
“Tinogara tichionga Mwari patinotaura nezvenyu mose muminyengetero yedu, nokuti tinoramba tichifunga nezvebasa renyu rinobva pakutenda nebasa renyu rorudo nokutsungirira kwenyu nokuda kwetariro yenyu yamuinayo munaShe wedu Jesu Kristu pamberi paMwari wedu uye Baba vedu.” (1 VaT. 1:2, 3) Mashoko aya anonyatsotsanangura zviri mumwoyo medu! Tinotenda Jehovha nokutipa hama dzakaita semi uye nebasa rakanaka ramuri kuita. Nei tichidaro?
Mugore rapfuura, maishanda nesimba pakuita “basa renyu rinobva pakutenda” uye “basa renyu rorudo” muchitsigira Umambo. Vazhinji venyu makatsvaka nzira dzekuti muwedzere ushumiri hwenyu. Vamwe vakatamira kune dzimwe nharaunda kana kuti vakatoenda kune dzimwe nyika dzinodiwa vaparidzi vakawanda voUmambo. Vamwe vakawedzera ushumiri hwavo nokuparidza munzvimbo dzinowanikwa vanhu vakawanda. Vazhinji vakakurudzirwa kuita upiyona hwebetsero mumwaka weChirangaridzo, mumwedzi waiuya mutariri wedunhu, uye patakaita mushandirapamwe muna August 2014. Kunyange zvazvo mamiriro enyu ezvinhu akasiyana-siyana, muri kushandira Jehovha nemweya wose, uye tinokutendai chaizvo. (VaK. 3:23, 24) “Basa renyu rinobva pakutenda” rinoita kuti tionge Jehovha!
Tinoongawo chaizvo “basa renyu rorudo” ramakaita pakuvaka zvivako zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa pakunamata munyika yose. Zvivako izvi zviri kudiwa zvakanyanya nokuti vanhu vaJehovha vari kuramba vachiwanda. (Isa. 60:22) Somuenzaniso, gore rakapera takava nenhamba yatisati tambosvitsa yevaparidzi 8 201 545, mwedzi wega wega tichiitisa zvidzidzo zveBhaibheri zvinosvika 9 499 933. Nekuwedzera kuri kuita vanhu, mahofisi emapazi akawanda ari kufanira kukudzwa kana kugadziridzwa. Uyewo zviri pachena kuti tava kuda dzimwe Dzimba dzoUmambo! Munyika dzakawanda mava kudiwawo mahofisi eshanduro anenge asiri pabazi, kuti vashanduri vedu vaite basa ravo vachigara kunotaurwa mutauro wavo.
Saka tinogona kuzvibvunza kuti, ‘Zvii zvandingaita kuti nditsigirewo basa rokuvaka nzvimbo idzi?’ Vamwe vedu tinogona kuzvipira kuita basa iroro. Tingava tiine unyanzvi hwokuvaka kana kuti tisina, tose tine ropafadzo yekupa zvinhu zvedu zvinokosha kuti titsigire basa racho. (Zvir. 3:9, 10) Paigadzirwa tebhenekeri kana kuti tende, vaIsraeri vakapa zvakawanda zvokuti vakatozonzi vachirega kuunza zvipo. (Eks. 36:5-7) Chokwadi mienzaniso yemuMagwaro yakaita seuyu, inotibaya mwoyo uye inotikurudzira kuti tiitewo saizvozvo. “Basa renyu rorudo” pakutsigira basa dzvene iri rinokosha, rinoitawo kuti tionge Jehovha!
Tinofara chaizvo patinoona hama dzedu dzichiramba dzichitsungirira. Somuenzaniso, fungai nezvehama dzedu dzekuSouth Korea. Kubvira muna 1950, hama dzechiduku munyika iyi dziri kupiwa mitongo yekugara mujeri kwenguva yakareba zvakasiyana-siyana nokuti dzinoramba kupinda muchiuto. Kwemakore, hama dzedu dzanga dzichitsungirira zvose izvi, dzisingadzokeri shure. Kutsungirira kwavo kunosimbisa kutenda kwedu!
KuEritrea kune hama dzedu nhatu dzava nemakore anopfuura 20 dziri mujeri. Vamwewo, kusanganisira hanzvadzi dzedu nevana vadzo, vakambovharirwa kwenguva pfupi. Pane zvakawanda zviri kuitwa kuti vasunungurwe asi hapana vati vabudiswa. Kunyange zvakadaro, hama dzedu hadzina kumbobvuma kupinda muchiuto. Dziri kuramba dzakavimbika kuna Mwari pasinei nokuomerwa. Hatikanganwi hama idzi dzakatendeka patinonyengetera.—VaR. 1:8, 9.
Ichokwadi kuti vakawanda venyu hamuna kuiswa mumajeri muchisungirwa kutenda kwenyu. Zvisinei, vakawanda venyu muri kutsungirira matambudziko ekukwegura, zvirwere zvisingaperi, kushorwa neveukama kana kuti newamakaroorana naye asiri Chapupu, uye mamwe matambudziko anongozivikanwa nemi chete. Kunyange zvakadaro munoramba muchishumira Jehovha makatendeka! (Jak. 1:12) Rambai makadaro. Kutsungirira kwenyu kunoitawo kuti tionge Jehovha.
Patinofunga zvakanaka zvamunoita, zvakadai sebasa renyu rinobva pakutenda, basa renyu rorudo uye kutsungirira kwenyu, zvinoita kuti ‘tionge Jehovha, nokuti akanaka.’ (Pis. 106:1) Mose zvenyu tinokudai nemwoyo wose, uye tinonyengetera kuna Jehovha kuti akusimbisei, akutsigirei, uye akukomborerei kuti mumushumire nokusingaperi.